Petition Request to Japanese Government and Japanese people for continuous support in tackling Myanmar's Rakhine state issue
Request to Japanese Government and Japanese people for continuous support in tackling Myanmar's Rakhine state issue
5270 people have signed. Add your voice!
( Myanmar Translation is below the Japanese)
Myanmar Version pdf link : https://goo.gl/Jg3bpf
[ Myannmar Zawgyi Version ]
၂၀၁၇ခုနှစ် သြဂုတ်လ၂၅ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိ နယ်မြေခံလုံခြုံရေးစခန်းများကို ARSAအကြမ်းဖက်အဖွဲ့က အလစ်ဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအကြမ်းဖက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် မစ္စတာ နိုရိအို မာရုယာမက “အကြမ်းဖက်မှုကိုပြင်းထန်စွာရှုတ်ချကြောင်းနှင့် အသက်စွန့် လွှတ်သွားခဲ့ရသူများ၊ကျန်ရစ်သူမိသားစုဝင်များအတွက်အထူးပင်ဝမ်းနည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်တည်ငြိမ်ရေးအတွက် မြန်မာအစိုးရ၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကို ထောက်ပံ့ကူညီသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း” ကြေညာချက်ကို ထုတ်ပြန်ပေးသည့်အတွက်ဂျပန်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသားများမှ အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းဦးစွာပြောကြားလိုပါသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အရေးကိစ္စများသည် အလွန်ထိလွယ်ရှလွယ်သောကိစ္စများဖြစ်ပြီး သတိကြီးစွာဖြင့်တစ်ဆင့်ချင်းစီဖြေရှင်းရမည့်အရေးကိစ္စများဖြစ်ပါသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများစွာနေထိုင်လျက်ရှိပြီး ယခုအကြိမ်အလစ်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် အကြမ်းဖက်မှုကိုထိတ်လန့်နေကြသောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးအားလုံးပင်နီးစပ်ရာမြို့၊ရွာများသို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရသည့်အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိနေပါသည်။
ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေတွင် အချို့မီဒီယာများသည်လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများအကြောင်းကိုသာမီးမောင်းထိုး၍ သတင်းတင်ဆက်မှုများပြုလုပ်သောကြောင့်နိုင်ငံတကာမှလည်း မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသားတို့အားဖိအားပေးသည့်သဘောသက်ရောက်လျက်ရှိပါသည်။မြန်မာပြည်တွင်းသာမကပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများမှလည်းယခုကဲ့သို့ အခြေအနေပေါ်တွင်စိတ်မကောင်းခြင်းကြီးစွာဖြစ်နေရပါသည်။သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံသားများအနေနှင့်နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့သည် ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံး ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ယခုဖြစ်ပေါ်နေသောပြဿနာနှင့်ပတ်သက်၍လည်းဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်းရှာဖွေကာသတိကြီးစွာဖြင့်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေကြောင်း အခိုင်အမာယုံကြည်လျက်ရှိပါသည်။
ဂျပန်ရှိမြန်မာနိုင်ငံသားများအပါအဝင် အမိမြေမှမြန်မာနိုင်ငံသားများသည်လည်း နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့အား အပြည့်အဝယုံကြည်ထောက်ခံလျက်ရှိကြောင်း ယခုစာမှတဆင့်ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရအဖွဲ့ နှင့်ဂျပန်ပြည်သူများအားအသိပေးပြောကြားလိုပါသည်။
နောက်ဆုံးအနေနှင့် ဂျပန်အစိုးရနှင့်ဂျပန်ပြည်သူများသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အခြေခံလူမှုအဆောက်အအုံတည်ဆောက်ရေးစသည့် ကဏ္ဍများတွင် နွေးထွေးစွာကူညီပေးခဲ့ပြီး ဤသို့ ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့မှုများအတွက် မြန်မာနိုင်ငံသားများမှ အမြဲပင်ကျေးဇူးတင်သတိရလျက်ရှိပါသည်။ ဂျပန်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများအနေနှင့်လည်း ဂျပန်မြန်မာချစ်ကြည်ရေးတိုးတက်ခိုင်မြဲစေဖို့အတွက်တတ်စွမ်းသမျှကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားရန်အမြဲအသင့်ရှိပါသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရနှင့်တကွဂျပန်နိုင်ငံသားများမှလည်း ယခင်အတိုင်းမပြောင်းလဲဘဲ မြန်မာနိုင်ငံနှင့်မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရအား ဆက်လက် အားပေးကူညီပေးနိုင်ပါစေကြောင်း ဂျပန်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများနှင့်မြန်မာနိုင်ငံသားများမှ ပြင်းပြစွာဆန္ဒပြုလျက်ရှိပါသည်။
စာတွဲ။ ယခုပေးပို့စာပါ အကြောင်းအရာအားအား သဘောတူလက်ခံသောမြန်မာနိုင်ငံသားများ၏အမည်နှင့်လက်မှတ်များ။
[ Myannmar Unicode Version ]
၂၀၁၇ခုနှဈ သွဂုတျလ၂၅ရကျနတှေ့ငျ မွနျမာနိုငျငံရခိုငျပွညျနယျမွောကျပိုငျးရှိ နယျမွခေံလုံခွုံရေးစခနျးမြားကို ARSAအကွမျးဖကျအဖှဲ့က အလဈဝငျရောကျစီးနငျးတိုကျခိုကျခဲ့ပါသညျ။ ထိုအကွမျးဖကျမှုနှငျ့ပတျသကျ၍ ဂပြနျနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန ပွောရေးဆိုခှငျ့ရပုဂ်ဂိုလျ မစ်စတာ နိုရိအို မာရုယာမက “အကွမျးဖကျမှုကိုပွငျးထနျစှာရှုတျခကြွောငျးနှငျ့ အသကျစှနျ့လှတျသှားခဲ့ရသူမြား၊ကနျြရဈသူမိသားစုဝငျမြားအတှကျအထူးပငျဝမျးနညျးစိတျမကောငျးဖွဈရကွောငျး၊ ရခိုငျပွညျနယျငွိမျးခမျြးရေးနှငျ့တညျငွိမျရေးအတှကျ မွနျမာအစိုးရ၏ ကွိုးပမျးအားထုတျမှုမြားကို ထောကျပံ့ကူညီသှားမညျဖွဈကွောငျး” ကွညောခကျြကို ထုတျပွနျပေးသညျ့အတှကျဂပြနျရောကျမွနျမာနိုငျငံသားမြားနှငျ့ မွနျမာနိုငျငံသားမြားမှ အထူးပငျကြေးဇူးတငျရှိပါကွောငျးဦးစှာပွောကွားလိုပါသညျ။
ရခိုငျပွညျနယျမွောကျပိုငျးတှငျဖွဈပျေါနသေညျ့ အရေးကိစ်စမြားသညျ အလှနျထိလှယျရှလှယျသောကိစ်စမြားဖွဈပွီး သတိကွီးစှာဖွငျ့တဈဆငျ့ခငျြးစီဖွရှေငျးရမညျ့အရေးကိစ်စမြားဖွဈပါသညျ။ ရခိုငျပွညျနယျတှငျ တိုငျးရငျးသားလူမြိုးစုမြားစှာနထေိုငျလကျြရှိပွီး ယခုအကွိမျအလဈဝငျရောကျတိုကျခိုကျမှုကွောငျ့ အကွမျးဖကျမှုကိုထိတျလနျ့နကွေသောတိုငျးရငျးသားလူမြိုးအားလုံးပငျနီးစပျရာမွို့၊ရှာမြားသို့ထှကျပွေးတိမျးရှောငျနရေသညျ့အခွအေနသေို့ရောကျရှိနပေါသညျ။
ထိုကဲ့သို့သောအခွအေနတှေငျ အခြို့မီဒီယာမြားသညျလူ့အဖှဲ့အစညျးတဈခု၏ထိခိုကျပကျြစီးမှုမြားအကွောငျးကိုသာမီးမောငျးထိုး၍ သတငျးတငျဆကျမှုမြားပွုလုပျသောကွောငျ့နိုငျငံတကာမှလညျး မွနျမာနိုငျငံတျောအစိုးရနှငျ့ မွနျမာနိုငျငံသားတို့အားဖိအားပေးသညျ့သဘောသကျရောကျလကျြရှိပါသညျ။မွနျမာပွညျတှငျးသာမကပွညျပရောကျမွနျမာနိုငျငံသားမြားမှလညျးယခုကဲ့သို့အခွအေနပေျေါတှငျစိတျမကောငျးခွငျးကွီးစှာဖွဈနရေပါသညျ။
သို့သျော မွနျမာနိုငျငံသားမြားအနနှေငျ့နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျနှငျ့ မွနျမာအစိုးရအဖှဲ့သညျ ရခိုငျပွညျနယျတဈခုလုံး ငွိမျးခမျြးရေးနှငျ့စီးပှားရေးဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေး၊ယခုဖွဈပျေါနသေောပွဿနာနှငျ့ပတျသကျ၍လညျးဖွရှေငျးရနျနညျးလမျးရှာဖှကောသတိကွီးစှာဖွငျ့ကွိုးပမျးဆောငျရှကျနကွေောငျး အခိုငျအမာယုံကွညျလကျြရှိပါသညျ။
ဂပြနျရှိမွနျမာနိုငျငံသားမြားအပါအဝငျ အမိမွမှေမွနျမာနိုငျငံသားမြားသညျလညျး နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျနှငျ့ မွနျမာအစိုးရအဖှဲ့အား အပွညျ့အဝယုံကွညျထောကျခံလကျြရှိကွောငျး ယခုစာမှတဆငျ့ဂပြနျနိုငျငံအစိုးရအဖှဲ့နှငျ့ဂပြနျပွညျသူမြားအားအသိပေးပွောကွားလိုပါသညျ။
နောကျဆုံးအနနှေငျ့ ဂပြနျအစိုးရနှငျ့ဂပြနျပွညျသူမြားသညျ မွနျမာနိုငျငံ၏ ပညာရေး၊ ကနျြးမာရေး၊ အခွခေံလူမှုအဆောကျအအုံတညျဆောကျရေးစသညျ့ ကဏ်ဍမြားတှငျ နှေးထှေးစှာကူညီပေးခဲ့ပွီး ဤသို့ ကူညီထောကျပံ့ပေးခဲ့မှုမြားအတှကျ မွနျမာနိုငျငံသားမြားမှ အမွဲပငျကြေးဇူးတငျသတိရလကျြရှိပါသညျ။ ဂပြနျရောကျမွနျမာနိုငျငံသားမြားအနနှေငျ့လညျး ဂပြနျမွနျမာခဈြကွညျရေးတိုးတကျခိုငျမွဲစဖေို့အတှကျတတျစှမျးသမြှကွိုးပမျးဆောငျရှကျသှားရနျအမွဲအသငျ့ရှိပါသညျ။
ဂပြနျနိုငျငံအစိုးရနှငျ့တကှဂပြနျနိုငျငံသားမြားမှလညျး ယခငျအတိုငျးမပွောငျးလဲဘဲ မွနျမာနိုငျငံနှငျ့မွနျမာနိုငျငံ အစိုးရအား ဆကျလကျ အားပေးကူညီပေးနိုငျပါစကွေောငျး ဂပြနျရောကျမွနျမာနိုငျငံသားမြားနှငျ့မွနျမာနိုငျငံသားမြားမှ ပွငျးပွစှာဆန်ဒပွုလကျြရှိပါသညျ။
စာတှဲ။ ယခုပေးပို့စာပါ အကွောငျးအရာအားအား သဘောတူလကျခံသောမွနျမာနိုငျငံသားမြား၏အမညျနှငျ့လကျမှတျမြား။